Anya onye nyocha na ọdịnihu nke sọftụwia na ngwa ahịa email
Tọzdee, Disemba 1, 2011 Saturday, January 14, 2017 Scott Hardigree
Otu uru dị na ibi ndụ na iku ume niche ụlọ ọrụ, dịka ịrụ ọrụ email gị n'ụlọnga, bụ na ọ na-enye mmadụ ohere ịtụgharị uche n’ihe ọdịnihu nwere ike ịbụ.
Ihe ndị a bụ ọdịnihu nke ọhụụ ahịa email ga-adị ka afọ 2017 maka ndị na-eme ọrụ, ndị ahịa na ndị ahịa.
Aha Egwuregwu Agbanwewo
Ọganihu ngwa ngwa afọ isii na okwu ahụ bụ "email ahịa" apụla n'anya na asụsụ anyị kpamkpam. Ọ bụ ezie na ọ dị ala karịa 2011, ịre ahịa email ka na-emepụta ROI dị mkpa; agbanyeghị na ọ bụ naanị otu ụgbọ ahịa ahịa dijitalụ.
N'ọdịnihu a, njikọta n'etiti mmekọrịta mmadụ na ibe, ekwentị mkpanaaka, ọnọdụ dabere na ahịa na-ụlọ enweghị ntụpọ. Owa ozi mmadu n’onwe ha adighi mkpa.
Enwere obere nuances iji zipu ozi dị irè site na nke ọ bụla n'ime ọwa ahịa ndị a, mana ndịrịta iche dị iche iche na-abụkarị ndị ọkacha mmasị edepụtara nke ọma ọ bụghị usoro nnyefe ahụ n'onwe ya. Ọrụ bụ isi n'iji ọwa ndị a agwakọtara bụ otu ihe dị ka ọ dị na 2011: nkesa nke ozi dị mkpa na nke oge. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ebumnuche bụ, ọ bụrụkwala mgbe ọ bụla, itinye onyinye ziri ezi, n'ihu onye ziri ezi, n'oge kwesịrị ekwesị.
Ebe ọ bụ na okwu email ahụ na-ere ahịa, ahịa mmadụ na ahịa mkpanaka na-egbochi ya ma na-ewekarị iwe maka ndị ike gwụrụ, ha ga-aga. Nabata na afọ nke Izi ozi Dijitalụ.
Nnukwu mgbanwe dị iche iche na ozi ntanetị nke oge a abụghị otu esi zoo ya; ọ bụ nnabata na nkwado nke teknụzụ, mkpa ọ dị maka ọrụ aka, na nghọta na ikike nke ndị na-azụ ahịa.
Mgbanwe ahụ dị ngwa na nzacha
Na afọ 2017, Dijital Izi ozi Na enye (DMPs) nwere ike kesaa ozi mgbasa ozi ahaziri na ngwaọrụ, oge na ohere. Ugbua ha ruru ezigbo oge, nkwukọrịta na-agbanwe agbanwe nke na-agabigaghị na ntanetị ọhụụ, dị ka TV mmekọrịta, yana ndị agadi, dị ka ire ere. Mana onyinye DMP ejedebeghị na mgbasa na nsuso nke ozi ahịa dijitalụ. Ha emeela ọganihu dị ịtụnanya na nyocha data na akpaaka ahịa.
Nkwupụta akụkọ na mmepụta mkpọsa dịkwa oke nghọta na ịrụ ọrụ nke ọma, ọ gafeela mmeghe yana pịa na ndị editọ WYSIWYG. Chee echiche ndụ, nnwale dị iche iche na nhazi, ijikọ ọdịnaya dị iche iche dị iche iche, nnyefe nzaghachi, na mmechi emechi, usoro ROI na-agafe na 10.th ike.
Ndị DMP na-enyekwa usoro siri ike nke nchịkọta data. Ihe data a bara ụba na-esite na mmekọrịta ọ bụla; site na ndenye aha dị mfe na ngwaọrụ mkpanaka na data omume nke anakọtara site na aka ndị ahịa na-adịghị n'ịntanetị.
Mana olee otu onyinye DMP si gbalite ngwa ngwa? Laa azụ na 2012, ndị Ndị Na-enye Ọrụ Email (ESPs) kpochapụrụ, ụdị Google, iji mee ka ndị na-ere ahịa n'ime interface ha-na naanị interface ha. Ngwá agha nke nkà na ụzụ na ọgụgụ isi malitere.
Perks nke Ọnụ Ahịa na Ike Ọhụrụ
Ihe agha Digital Digital a pụtara nye ndị na-ere ahịa kwa ụbọchị bụ na ọnụ ahịa ọrụ izi ozi dijitalụ malitere ịda mba nke ukwuu na ngwa ọrụ ahụ malitere ịmalite ngwa ngwa. Nke a bụ doro anya na-anabata ozi maka marketer kamakwa maka Ndị Na-enye Ozi Digital, n'ihi na ekpochapụ nkwado na nnweta weere ọnọdụ nke na-agbanwe ụlọ ọrụ ahụ ebighi ebi.
Na ebumnuche iji tinye usoro ọ bụla nke ndị ahịa chọrọ, Dijital Izi ozi Na enye malitere inweta ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ụlọ ọrụ nyocha data. Ha goro ndị ọrụ nyocha na ndị ọkachamara UI. Ha mepere ngwa ha rue uwa ma weputa uzo ohuru na nkeji iri na ise. Ha na-ere ọkụ.
Obere DMP ndị pere mpe enweghị ike ijigide ọsọ ọsọ ma belata ego ha nwetara. E gburu ha ma ọ bụ loda ha. E nyeghachi ndị niche ndị ọrụ na mgbakwunye. Maka ahịa nke ọtụtụ narị ndị asọmpi jupụtara na mbụ, ugbu a ọ bụ naanị ọnụ ọgụgụ ole na ole nke mbara ụwa.
Ndị DMP nke oge a na - ewepụta obere ego ha na - enweta n’ahịa ọ bụla ha mere na mbụ. Agbanyeghị, ọnụ ọgụgụ ha buru oke ibu na, ọ bụrụ na ọ bụghị maka ndị na-eme mkpọtụ ha yana ụkpụrụ nduzi nchịkwa onwe onye siri ike, ndị na-akwado ntụkwasị obi na ndị na-akwado nzuzo ga-amalite inwe mmasị na-adịghị mma n'ihe omume ha.
Ha chọpụtakwara ego ọhụrụ ha ga - enweta, nke kachasị elu ha sitere na inye ndị ahịa data ha ụlọ ikike. A na-enye ọgụgụ isi a, ma gbanwere ya, ụlọ ọrụ nyocha na ọwa ahịa ahịa asọmpi dịka ọchụchọ akwụ ụgwọ, ozi ziri ezi, na mgbasa ozi ngosi dijitalụ.
Rrị elu nke ndị omenkà na ndị omenkà
Ngwaọrụ zuru ezu, nke ndị na-enye Digital Messaging Providers nyere na 2017, dị ugbu a iru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ahịa ọ bụla. Agbanyeghị mmemme izipu ozi dijitalụ bụ ọkaibe karịa. Ndị ọrụ nwere nkà bụ ndịiche dị iche iche n'etiti mmemme na - eweta ROI dara ogbenye, adịghị mma na nke pụrụ iche site na Izi ozi Dijitalụ, mana dịka akụkọ ntolite na - agwa anyị na ọ bụghị ndị ọkachamara niile ga - ebelata.
Ebe ọ bụ na mkpesa ahụ siri ike ma na-arụ ọrụ, ndị na-ere ahịa anaghịzi achọ ụlọ ma ọ bụ ndị ahịa mgbakọ na mwepụ ahịa iji nyochaa data ma kwado ha. Agbanyeghị, a ga-etinyerịrị data a ugbu a na mmemme ahụ ka kachasị nke ọma. Rockstars nke Digital Messaging ụlọ ọrụ ugbu a daba n'ogige abụọ, ndị omenkà na technicians.
Ndị omenkà bụ ndị na-eke atụmatụ ma na-eme ha; bụrụ ndị na-eche echiche, ndị njikwa, ma ọ bụ ndị okike. Ndị ọkachamara ahụ bụ ndị na-enyocha nsogbu, nke sitere na ọsọ ọsọ na-agbapụta ọsọ na mgbochi mgbochi, ma mezie ha.
Omume na Nghọta Ndị Ahịa
Ndị na-azụ ahịa maara nke ọma ọtụtụ ozi azụmaahịa na-agagharị gburugburu ha ugbu a. Nke a emeela ka ndị na-ere ahịa gbanwee, ihe otu oge bụ, na-enye otu akụkụ na mkparịta ụka ndị ahịa na-elekwasị anya. Mkparịta ụka ndị a na-ewere ọnọdụ na ọkwa otu n'otu na n'etiti igwe mmadụ. Ha na - agbanwe ka oge na - agbanwe dị ka igwe na omume na - agbanwe ma gbanwee ọdịnala.
Ihe data nke onye ahia nyere, ma weputa site na omume ha, enweghi oke. Onye na-ere ahia nwere ihe omuma a na-akparaghị ókè banyere uche nke onye ọ bụla yana ụdị amụma amụma nke klaasị ha. Onye na-ere ahịa na-eji ozi a iji wepụta ihe onye na-azụ ahịa nwere ike ịzụta ugbu a, na n'ọdịnihu, yana ịkọ ọdịmma ndụ ha wee nyezie akụrụngwa kwesịrị ekwesị.
N'ihi na onye na-eri ahia maara nke ọma na ahịa omume ma na-echegbu onwe ya na omume ahụ ga-emesị bụrụ oke mbibi; emebeala nchekwa ikike zuru ụwa ọnụ nke ndị nwe onwe ya ka adịbeghị anya, nke akpọrọ Choice.
Nhọrọ bụ ihe na-akwado, nhazi data na ebe ọkacha mmasị nke nwere nchebe na ikike. Ọ ga-enye onye na-azụ ya ohere iji chịkwaa, kpọm kwem, ụdị data anakọtara ma tinye n'ọrụ, site na ahịa na ozi ha ga-anabata, onye, ​​yana otu esi agapụta.
Nke a bụ ọrụ n'efu nye ndị na-azụ ahịa mana ndị na-enye Dijital Izi ozi ga-enye ikikere ozi a, nke ga-ahụ na ha mezuru atụmanya ndị ahịa ma rube isi na Iwu Nchedo Nzuzo Dijitalụ nke 2015.
Ngbanwe nke Ọrụ
N’afọ 2017, ụlọ ọrụ Dijital Dijitalụ ejirila aka ya gbanwee onwe ya. Na oge mbu nke ahia email, oke ọdụm nke ụgwọ, oge na nlebara anya gara sọftụwia ahịa email. Mana ugbua na ebuputala oru ndi DMP, ezi uru nke Izi ozi dijitalya dabere na talent nke n’eji ihe ndia.
A gosipụtara mgbanwe ọrụ a na mmekọrịta dị n'etiti onye na-ere ahịa na onye na-azụ ahịa. Ndị na-ere ahịa ugbu a maara nke ọma na mkpa na ọchịchọ nke ndị ahịa ha na atụmanya ha. Ọ bụrụ na ha ga-aga n'ihu na mkparịta ụka ahụ na afọ ndị na-abịanụ, ha kwesịrị. Na mgbanwe maka ozi nkeonwe ha miri emi, ndị na-azụ ahịa na-enweta akwa akwa, uru dị elu na ahụmịhe na-achịkwa nzuzo ha karịa mgbe ọ bụla ọzọ.
Tags: omume igwe mmadụdijital ozi na-ewetadigital nchedo omumedmpemail Marketingonye na-enye ọrụ emailemail atụmatụespndu ndu
Nchịkọta Youtube dị Ebe a
Obere Dijitalụ na Ọdịnihu nke ịkwụ ụgwọ
Dee 2, 2011 na 4: 46 AM
Echere m na n'ime afọ 10 ịre ahịa email ga-apụ nwa oge na ozi ga-erute ndị ahịa n'ụzọ dị iche.
Dee 5, 2011 na 10: 07 AM
Hi Vaidas - Ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ihe ọdịnihu ga-abụ, ọkachasị ihe izi ozi ịre ahịa dijitalụ ga-adị. Jiri ozi ‘email niile nwụrụ’, ị nọghị naanị gị na-eche na email ga-apịaji gaa na channelụ ndị ọzọ.